Daawo:-Hadalada isdiidaya ee kasoo ifbaxay kulankii dhexmaray Farmaajo & Uhuru Kenyatta-Video
DEG DEG:-Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ku heshiiyay dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyad ee labada dal-Sawiro
Wasiiro miisaan culus oo deg deg isku casiley kadib fadeexad culus.
Akhriso:-Muuse Biixi oo ku wajahan Dalka Kenya & cida ka dambeysa Socdaalkiisa.
Daawo:-Puntland oo dooratay Gudoomiye cusub & Gaas oo si deg deg ah uga hadlay-Video
Daawo:-Madaxweyne Farmaajo oo weerar ku qaaday Siyaasiyiinta Mucaaradka ah-Video
Daawo:-Kacdoonka Puntland & Jabhadda Soomaaliland oo lala xidhiidhiyey Dowladda Federaalka.
Daawo:-Deeq ku sii jeeda magaalada Beledweyne oo ka anbabaxday magaalada Laascaanood-Video
Akhriso:-UN-ka oo beeniyey sheegasho ka timid Kenya oo ku saabsan kiiska Badda.
Wararkii ugu dambeeyay xiisada Dagaal ee ka taagan Magaalada Boosaaso.